အန္တရာယ်များတဲ့ Bird Box နဲ့ Tide Pod တို့လို prank မျိုးတွေကို YouTube ban ပြီ – Myanmar Mobile App
အန္တရာယ်များတဲ့ Bird Box နဲ့ Tide Pod တို့လို prank မျိုးတွေကို YouTube ban ပြီ
Posted on January 16, 2019 January 16, 2019 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Netflix Original Bird Box ဟာ အတော်လေးပေါက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ Bird Box challenge ကို ပြိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် YouTube ပေါ်မှာ ဗွီဒီယိုတွေ အပြိုင်အဆိုင်တင်ကြပါတော့တယ်။ အချို့ဗွီဒီယိုတွေထဲမှာ အိမ်ထဲမှာ မျက်လုံးစည်းထားတာဆိုတော့ ပျော်ဖို့ကောင်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန္တရာယ်များတဲ့ မျက်လုံးစည်းပြီးကားမောင်းတာမျိုးတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
လူအတော်များများဆီကနေပြီးတော့ အန္တရာယ်များတဲ့ဗွီဒီယိုတွေကို ခွင့်မပြုဖို့အတွက် တောင်းဆိုမှုတွေရထားပြီးတဲ့အချိန်မှာ YouTube ဟာ ban ဖို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
YouTube က policy ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကို blog post မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
အန္တရာယ်များသော challenges နဲ့ pranks – သတိပေးချက် အကြမ်းဖက်မှု ဒါမှမဟုတ် အန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုအားပေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ dangerous challenges and pranks လို့ သတ်မှတ်မှာပါ။ YouTube က challenges and pranks တွေရဲ့ အိမ်သဖွယ်လို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ရယ်စရာ၊ ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာက အဆင့်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်အန္တရယ်ရှိတဲ့အဆင့်မျိုးတွေအတွက် ဂိုက်လိုင်းတွေပေးဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ prank လုပ်ဆောင်သူတွေကို ထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးရမှာ ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ Dangerous Challenges & Pranks FAQ ကို အသေးစိတ်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
YouTube ရဲ့ official policy ကတော့ update လုပ်ထားလိုက်ပါပြီ။ အသစ်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အရာတွေကို ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
• Challenges that encourage acts that have an inherent risk of severe physical harm
• Pranks that make victims believe they’re in physical danger
• Pranks that cause emotional distress to children
• Many worry that YouTube’s guidelines are too ambiguous and will lead to some content being deleted while others are left untouched. As YouTuber Philip Defranco discusses, will this only remove videos involving dangerous stunts such as the Bird Box and Tide Pod challenges or will it also wipe the platform free of everything that includes upsettingachild such as Jimmy Kimmel’s Halloween Candy challenge?
• To enforce these new policies and deter creators from uploading harmful videos, YouTube is using its community guidelines three-strike rule. After the channel has been stricken three times, the video platform can choose to shut it down completely.
• YouTube is giving creators who have previously uploaded this type of contentapass. Over the next two months, any videos that were already uploaded involving harmful pranks or challenges will be deleted without striking the channel.
ကဲ စာဖတ်သူပရိသတ်ကြီးရေ prank လည်း တော်ရုံပဲကောင်းတယ်ဆိုတာ Youtube က သတင်းစကားပါးနေပါတယ်။
Netflix Original Bird Box ဟာ အတျောလေးပေါကျသှားပွီးတဲ့နောကျမှာ Bird Box challenge ကို ပွိုငျဆိုငျဖို့အတှကျ YouTube ပျေါမှာ ဗှီဒီယိုတှေ အပွိုငျအဆိုငျတငျကွပါတော့တယျ။ အခြို့ဗှီဒီယိုတှထေဲမှာ အိမျထဲမှာ မကျြလုံးစညျးထားတာဆိုတော့ ပြျောဖို့ကောငျးထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အန်တရာယျမြားတဲ့ မကျြလုံးစညျးပွီးကားမောငျးတာမြိုးတှလေညျး ပါဝငျနပေါတယျ။
လူအတျောမြားမြားဆီကနပွေီးတော့ အန်တရာယျမြားတဲ့ဗှီဒီယိုတှကေို ခှငျ့မပွုဖို့အတှကျ တောငျးဆိုမှုတှရေထားပွီးတဲ့အခြိနျမှာ YouTube ဟာ ban ဖို့လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။
YouTube က policy ပွောငျးလဲလိုကျတယျဆိုတဲ့သတငျးတှကေို blog post မှာ တငျခဲ့ပါတယျ။
အန်တရာယျမြားသော challenges နဲ့ pranks – သတိပေးခကျြ အကွမျးဖကျမှု ဒါမှမဟုတျ အန်တရာယျရှိတဲ့လုပျဆောငျမှုကိုအားပေးတဲ့ အကွောငျးအရာတှပေါဝငျနမေယျဆိုရငျတော့ dangerous challenges and pranks လို့ သတျမှတျမှာပါ။ YouTube က challenges and pranks တှရေဲ့ အိမျသဖှယျလို ဖွဈနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ရယျစရာ၊ ပြျောစရာကောငျးတယျဆိုတာက အဆငျ့တဈခုရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အသကျအန်တရယျရှိတဲ့အဆငျ့မြိုးတှအေတှကျ ဂိုကျလိုငျးတှပေေးဖို့ လိုအပျလာပါတယျ။ prank လုပျဆောငျသူတှကေို ထိခိုကျမှုတှမေဖွဈအောငျကာကှယျပေးရမှာ ကြှနျတျောတို့တာဝနျဖွဈပါတယျ။ Dangerous Challenges & Pranks FAQ ကို အသေးစိတျဖတျစခေငျြပါတယျ။
YouTube ရဲ့ official policy ကတော့ update လုပျထားလိုကျပါပွီ။ အသဈထညျ့သှငျးလိုကျတဲ့အရာတှကေို ဖျောပွရမယျဆိုရငျ အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါတယျ။
ကဲ စာဖတျသူပရိသတျကွီးရေ prank လညျး တျောရုံပဲကောငျးတယျဆိုတာ Youtube က သတငျးစကားပါးနပေါတယျ။
အီလက်ထရောနစ် အသုံးအဆောင်တွေကို မစွဲလမ်းစေဖို့ ကလေးငယ်တွေကို သင်ကြားပေးရမယ့် အချက် (၈) ချက်
ယနေ့ခေတ်ကလေးငယ်များဟာ ကွန်ပျူတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ Tablet များနှင့်ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာကြပါတယ်။ ဒီအရေးကိစ္စဟာ မိဘများ၊ ကလေးအထူးကုများ၊ နှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို ဟောပြောနေသည့် စိတ်ပညာရှင်များအတွက် စဉ်းစားစရာကိစ္စဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ။ နောက်ဖော်ပြပါအချက်၈ချက်ကတော့ သင်ရောသင့်ကလေးအတွက်ပါအထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ဒီဂျစ်တယ်အသုံးအဆောင်များနှင့် သင့်တင့်မျှတစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးနည်းလမ်း ၈သွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၈. သင့်ကလေးအတွက် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအသုံးပြုချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားပါ။ ကလေးတစ်ဦး ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုသည့် ၊ ဒီဂျစ်တယ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုအသုံးပြုသည့် အချိန်ပမာဏဟာ သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အမေရိကန်ကလေးအထူးကုအကယ်ဒမီမှ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။ မွေးကင်းစအရွယ်မှ ၁၈လသားအရွယ် တီဗီအပါအ၀င်မည်သည့် အီလက်ထရောနစ်အသုံးအဆောင်ကိုမှမသုံးပါစေနဲ့။ အဘိုးအဘွား၊ ဆွေမျိုးများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် တစ်ခါတလေ Skype အသုံးပြုခြင်းမျိုးလောက်သာပြုလုပ်ပါ။ အသက် ၂နှစ်မှ ၅နှစ်အရွယ် တစ်နေ့အတွင်း စမတ်ဖုန်း၊ တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုချိန် ၁နာရီထက်မပိုပါစေနဲ့။ […]
Posted on July 4, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)
Zawgyi Version OPPO ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ flagship ကတော့ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာပါ။ Find7ကို launch လုပ်အပြီး လေးနှစ်အကြာမှာတော့ တရုတ်ပြင်ပကိုခြေဆန့်တဲ့အနေနဲ့ Find X ဆိုတဲ့ အမိုက်စားစမတ်ဖုန်းကို ဆန်းသစ်တီထွင်ပြီးတော့ ပြသခဲ့ပါတယ်။ OPOP နဲ့ Find X တို့အကြောင်း မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာကျန်နေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ Venus Dang နဲ့ ဒီဇိုင်းနာမန်နေဂျာ Fan Xiaoyu တို့ကို အင်တာဗျူးပြီးတော့ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ OPPO က အင်တာနေရှင်နယ်ကို ဘာကြောင့်သွားချင်တာလဲ။ အချို့အတွက်ကတော့ OPPO ဆိုတဲ့နာမည်လေးက အသစ်အဆန်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ၂၀၀၄ခုနှစ်တည်းက စတင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့နဲ့အတူ OnePlus၊ Vivo တို့ကလည်း အုပ်စုတစ်ခုတည်းမှာ […]
ဖေဖော်ဝါရီ၂၄ရက်နေ့တွင် ပြသတော့မယ့် Microsoft HoloLens 2